चौथोपटक मिति थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड : पुन मिति थपको माग ! – RadioMBC
Home > समाचार > चौथोपटक मिति थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड : पुन मिति थपको माग !
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १८:३२
चौथो पटकको मिति थपअनुसार पहिलो खण्डको १० मे ०१८ मा मिति सकिएको छ भने दोस्रो खण्डको छ दिन र तेस्रो खण्डको १६ दिन बाँकी रहेको छ । यसअघि मिति थप हुँदा दोस्रो खण्डका लागि २० मे ०१८ र तेस्रो खण्डका लागि ३० मे ०१८ सम्मको समय दिइएको थियो ।
उनका अनुसार यही गतिमा काम भएमा जुन अन्त्यसम्ममा सडक सुरक्षाबाहेकका काम सकिने देखिएको छ । सडक सुरक्षाका लागि बढीमा १५ दिन समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि उनीहरुले कति समय थप पाउँछन् सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सिफारिस गरिने उनले बताए ।